Liibiya: Qasrigii duulayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Liibiya: Qasrigii duulayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay
Diyaarad uu gaar u lahaa hoggaamiyihii dhintay ee Liibiya, Mucammar Qadaafi, ayaa waxa ay soo cagadhigatay magaalada caasimadda ah ee Tripoli kaddib ku dhawaad muddo ku dhaw toban sanadood ah oo ay Faransiiska u taallay ilaalin iyo dayactirba, waxaa sidaasi ku warramay warbaahinta Carabta wararkooda tabisa iyo kuwa maxalliga ahba.
Diyaaraddan wayn, ee ay farsamaysay shirkadda Airbus tirsigooduna yahay A340, ayaa soo dulmartay hawada magaalada Tripoli ka hor inta aanay soo cagadhigan garoonka caalamiga ah ee Mucaytiqiyah ee u dhaw magaalada caasimadda ah, taleefishinka arrimaha Carabta ka hadla ee Al-Carabiya TV ayaa arrintaas waxa uu soo qaatay subaxii 21-ka Juun.
Dhowr warbaahin ayaa waxa ay soo xigteen bayaanno uu soo saaray Ra’iisul Wasaare Cabdulxamiid Dubaybah, kaas oo ku sugnaa garoonka si uu arko cagadhigashada diyaaradda ee habeen hore.
Waxa uu sheegay in dayactirka diyaaradda iyo hababkii kalaba la soo dhammeeyay, iyadoo dowladda ku meel gaarka ah ay bixisay dhammaan kharashaadkii diyaaraddaas dib loogu soo celin lahaa waddanka Liibiya, xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa isla fiidkaas ku shaaciyay Facebook-ga.Mr Dubaybah ayaa sheegay in 14-ka diyaaradood ee haray, 12 ka mid ah la qorsheeyay in dib loogu soo celiyo Liibiya, halka dowladdu ay ka shaqaynayso sidii dibadda looga soo celin lahaa labada diyaaradood ee kale.
Sida ay ku warrantay warbaahinta Al Carabiya, diyaaradda Qadaafi, oo sidoo kale loo yaqaan “Qasrigii duulayay”, ayaa waxa ay jawi hoose ku dulmartay deegaanka taariikhiga ah ee Tripoli halkaas oo ay ku dulwareegtay ka hor inta aanay soo cagadhigan.
Isagoo weriyayaasha kala hadlayay diyaaradda, ayuu Mr Dubaybah waxa uu yiri “Dadka Liibiya ayaa go’aan ka gaaraya waxa laga yeelayo diyaaraddan” iyo in mas’uuliyiinta ay adeegsan karaan ama loo isticmaali karo danaha bulshada, sida uu baahiyay taleefishinka Al Carabiyah.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka dib loogu soo celiyo diyaaraddaas caanka ah waa “tallaabo wanaagsan oo qaadday Liibiya, oo la xiriirta ammaankeeda iyo hantideedaba”, taleefishinka ayaa sheegay.
Diyaaraddaas nooca raaxada ah oo ay dadka qaar ku tilmaameen in “Gudaheeda ay u farsamaysan tahay sida diyaaraddii Airbus ee [James] Bond”, ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay soo jiidatay indhaha warbaahinta caalamka.
Qadaafi oo 42 sanadood soo xukumay Liibiya, sidoo kalana lagu yaqaanay inuu gooni u socod ahaa oo uu xafladaha caalamka ku tegi jiray qaab isaga u gaar ah, ayaa waxaa lagu dilay magaaladii uu ka soo jeeday ee Sirte bishii Oktoobar 2011, xilli ay dalkaas ka socdeen dagaalo ka dhashay kacdoon dalka oo dhan ku baahan oo xukunkiisa loogaga soo horjeeday oo dalkaas ka bilowday bishii Febraayo ee isla sanadkaas.
Mas’uuliyiinta cusub ee Liibiya; Dowladda Midnimo Qaran ee uu hogaamiyo Mr Dubaybah, ayaa awoodda kala wareegtay dowladdii hore ee uu fadhigeedu ahaa magaalada Tripuli waxaana xilka loo dhaariyay bishii Maarso kaddib doorashooyinkii horraantii sanadkan lagu qabtay hannaan ay maalgelisay Qaramada Midoobay.
Previous articleMilitariga Lubnaan oo raashiin iyo saanad looga yaboohayo caalamka
Next articleDagaal Culus oo ka Socda Gobolka Tigray iyo Magaalooyin istraatiiji ah oay qabsadeen jabhada tigray